kwiminyaka elishumi eyadlulayo umfazi wam Marie nonyana yethu uJoel wafa | Apg29
kwiminyaka elishumi eyadlulayo umfazi wam Marie nonyana yethu uJoel wafa
kwiminyaka elishumi eyadlulayo, ngoDisemba 21 unkosikazi wam ngaphambi nje kokuba intsimbi 12 ebusuku kunye nonyana wethu nyförlöste uJoel wafa ukususela ngecala emva kwentsimbi yesine ekuseni ka-22 Disemba.
Kodwa elaa ithi wafa ngoDisemba 22, 2008 ingcwaba e Jonkoping kwi ehlathini Amangcwaba. Engcwabeni kukho iibhokisi ezimbini ezimhlophe. A esifubeni enkulu, kunye nesifuba elincinane imi phezu enkulu.
Ukuba ezi ziganeko, ndiye ezibhaliweyo kule ncwadi ebusuku elide. It is a ezihambayo incwadi sedrama kakhulu kwaye buhlungu, kodwa salatha ithemba eliqaqambileyo kuYesu Kristu. Uyakwazi ukufumana incwadi xa ufuna uqiniswe. Kubiza 150 Mqhayi. Kutshiphu kakhulu kangangokuba imali nto kuwo. Le ncwadi inika intuthuzelo kunye nenkuthazo kunye namanqaku ukuba nethemba kuYesu Kristu. Kwakhona evangelisationsbok omhle. Zithengele wona okanye ulunike omnye umntu isipho.
Le ncwadi ibizwa Ubusuku inde ngenxa yokuba ubusuku elide konyaka kunye ubusuku bude ebomini bam.
Kwincwadi ethi The obude Night
I wahlala emandlalweni yaye basebenza kwi site yam blog. Kwaba kwicala emva kwentsimbi yeshumi elinanye ebusuku. Xa phambi kwam endabubeka laptop yam phezu kwetafile encinane ngomthi olunokuba ukuyisonga. Ecaleni kwam nomfazi wam oyintanda kunye isisu sakhe enkulu yaye bafunda kwiphephandaba. Kwigumbi ecaleni kwigumbi lethu Dessan walala esingqengqelweni sakhe. Yonke into lazola, yonke into zoxolo, yaye yonke into entle. Njengoko basondela christmas ndasebenza kunye lweKresmesi nolweNyibidyala ukubulisa ngeelwimi ezininzi ezahlukeneyo njengokuba ndifuna blog wam. Xa ndandisebenza kuluhlu yam Marie isongiwe iphephandaba lakhe waza wathi:
"Ndiya kunyuka uye kulala."
Marie yayirhona ke ngoku xa wayeneminyaka kakhulu ukhulelwe, yayirhona sibi. Ukuze ukuba ukuphazamisa mna yena wayefuna ukuya kulala kwelinye igumbi. WoMthetho zilungiswe Hal enkulu ezigudileyo wazibeka elukhukweni ecaleni edesikeni. Kodwa ngenxa yesizathu esithile andizange ndiyicinge Marie wayeza kuya nokulala kwigumbi eyahlukileyo ngobu busuku.
"Ayikwazi uhlale?" Ndambuza ndathi kuye. Kodwa wathi ukuba ufuna ukulala apha eholweni.
"Kulungile," ndathi, "kodwa xa usiya kwigumbi lokuhlambela apha kakuhle kwi kum ukuze andiyi kuhlala ixesha elide kunye ikhompyutha '' Ewe, ndiya kuyenza loo nto," yena wathi, igumbi eyishiya wavala emnyango.
Ndaqhubeka ukubhala uluhlu wam lweKresmesi nolweNyibidyala umngxuma noqhagamshelo ndicinga ukupapasha. Mna a nga ri kona ukuba le ngokuhlwa ngoxolo ngephanyazo uya iinguqu ngokupheleleyo xa lokulala ngesiquphe wavula, nje phambi kwentsimbi yeshumi elinambini ebusuku, kunye Marie wangena. Ndathi ndakukhangela phezulu kwi computer waza wabona Marie, ndacinga oh kakuhle, kwaqalisa ixesha lokuba ayeke.
Kwakuyeyona nto ingundoqo yokugqibela yena. Wathi igama lam enethowni enothando kakhulu, ngendlela emnandi. Kwaye njengoko sithe ixeshana elincinane. Ndiya wabona, wazi ukuba uva iintlungu.
"Ngaba lixesha lokuba BB?" Ndabuza, ngoxa mna ndasala nangoku kunye laptop phezu kwetafile encinane ngamaplanga.
Uthe into phantse inaudible kum ukuba ndandingakwazi ukuwuqonda kunye bokubuthuma ngakumbi, kruthu phambili ziintlungu. Ndaphakama ngokukhawuleza, waya kuye waza wamthabatha ngenxa yokuba wayengayi ziwe phantsi. I eyenza ukuba unyawo embhedeni kabini lomntanakhe ngobunono phantsi ecaleni, ngeli thuba entlokweni yam yaqala ukubonakala ukuba ifowuni BB.
Njengokuba ndimi apho unyawo embhedeni, phambi emandlalweni wosana ukuba mna Dessan awayebubeke ukuze Bekumnandi wenza Marie amanga lonke Umandlalo wethu, ndakwazi ukuba akasayi kuba naliphi inombolo yefowuni kwinkumbulo yam imizuzwana ezininzi de Marie aqala Urhashaza ngamandla kunye yayikukunkcenkceza ezimbi kunye izandi ophuphumayo. I engayazi into endiya kuyenza, kodwa ngethuku lemvelo ndacinga kungcono ukuba naye phezu kwesi ngqengqelo. I wagoba phambili, wambamba, wayifaka up. Emva koko zadilika ukusuka unyawo embhedeni emgangathweni ngoxa inamathele naye iingalo zam.
Andizange ukuqonda ngoko, kodwa apho Marie wafela ezandleni zam. Into yokugqibela wathi igama lam, ekubeni yena wafela ezandleni zam.
Ngobusuku ka December 22, ubusuku obumnyama kakhulu ngo-2008, unale Christer Åberg busuku bude ebomini bakhe, xa ebuhlungu kakhulu kwaye ezingalindelekanga ulahlekelwa isiqingatha intsapho yakhe.
A libali lokwenyaniso ilahleko emangalisayo, ukuze azuze konke oko.
Abantu abaninzi baye beva abona bakhathazeka kakhulu indlela baye xa befunda le ncwadi, ubusuku elide. Omnye umntu wathi kum:
"Yintoni incwadi ezintle oyibhalileyo. Xa ndaqalisa ukuyifunda ndandingakwazi ukuyeka. Kwandichukumisa gqitha oko."
Ngobusuku ka December 22, ubusuku kunye neeyure ezininzi omnyama ngo-2008, unale Christer Åberg inde emnyama busuku umphefumlo wakhe, xa ebuhlungu kakhulu kwaye ezingalindelekanga ulahlekelwa isiqingatha intsapho yakhe.
Silandela ukholo somntu omnye alixengaxengi, yaye ukholo lwakhe nentembelo ukhokelo lukaThixo aze xa lee kwenzeka waza ngesiquphe ezahlulwe kwakhe ihlabathi.
Le ncwadi kwakhona ibali uthando shushu etha malunga uphendlo Christer Åberg ngayo uThixo, umnqweno wakhe ngenxa yothando ubomi obude iphupha lakhe ngenye imini ekugqibeleni baziva wayemthanda ngokwenene kwaye lufuneka.
IBALI yesigcawu nobusuku Okude
Ixesha lokuqala ndinolunya. Ndandihlala mothuko enkulu yaye babengazi ukuba indlela yokusingatha le meko, yaye wenza ndiyazi ukuba ndiya beziza kuwasingatha ngayo intombi yam ezizibikayo nje isililo ...
Ndandingenzanga kanye oko umbingeleli bacetyiswa ukuba xa wacelwa ukuba ndiza kuthi Dessan:
"Ndixelele kanye njengokuba kunjalo. Ukuba awukwazi ukukhusela abantwana abakuso."
Mna ke wathi Dessan ukuba umama ufile, ukuba ezulwini kunye noYesu soze kufika ekhaya kwakhona. Xa kamva umntwana enkulisa wambuza apho unina wayo, waphendula wathi:
"Yena ufile kwaye noYesu ezulwini."
Kodwa ngoku nje wamemeza waza wakhala. Wayesele lusizi kwaye ndandingazi ukuba ndiza kwenza ntoni ngokwam. Ndaya kungena egumbini kunye Dessan ngeengalo zam. Wamemeza yalala ubuso yakhe emagxeni am.
"Ndiya kukubethela into kuwe?" I wacela kuye.
"Ewe," waphendula ilizwi umntwana ilusizi kunye naye.
Ndandisazi Dessan ndalithanda ukucula nice Haleluya uhlala kum. Wayedla kusoloko ndinqwenela ukuba xa Ndamcela ukuba ukucula nantoni na. Walibiza oko ngenxa Haleluya uhlala kum, kodwa wayesoloko wathi: "Ndiyabulela kuwe." Emva nje kokuba Ndandidla ngokuthi "Ndiyabulela kuwe" Bendisazi ngoko nangoko kwakuthetha ntoni ingoma yena. Mna ndifumene phezu ingoma. It ezingafanelanga zombini kubantu abadala kunye nabantwana.
Yintoni na ukuba ukucula? "Ndabuza Dessan, waqiniseka ukuba wayefuna ukuba ukucula kanye loo ngoma.
Kodwa ke ndothuka, wathi Dessan kosana ezigqityiweyo:
I sigcawu? Itsy Bitsy Spider? "Asindim nkqu ingoma lamaKristu. Kodwa bavuma ukuba intombi yam, ngoxa mna naye ngeengalo zam Ivar indawo enkulu.
ndiyitshise yonke imvula.
Oku kwakungelula intshumayelo kum. Xa sasicula ingoma ukuze beqabe yesehlo isigcawu engqondweni yam. Ndabona ke kunzima ukwenyuka umsonto ngayo. Kodwa ngequbuliso le ntlekele. Kwafika imvula yakuhlamba yesigcawu. Kodwa ngoko kwafika ummangaliso - ummangaliso! Ilanga wavuka woma yonke imvula ukuze isigcawu wazomeleza, kwaye baqala ukwenyuka kwakhona.
Ngokufanayo, ke mna Dessan ubunzima ukusuka ntlekele, kodwa ilanga, uYesu uyavuka aze kusinika isibindi omtsha, ukuze nithi kuloo omtsha strong kwakhona ukuba ukwenyuka emva up.
Emva kokuba bevume le ngoma wadanduluka Dessan akusekho.
- Hlola ixabiso!
150 SEK / ngasinye
iincwadi 3: 300 SEK
akhawunti yebhanki: 8169 ukuya 5,303 725382-4
QAPHELA: Faka idilesi yakho!
Le ncwadi wathabatha iinyanga ezilishumi ukubhala, kodwa kulula kakhulu ukufunda yaye ilungele zombini abantu abaselula nangaphezulu, kwaye kwakhona isipho okanye evangelisationsbok !
Christer Åberg bahlala Meadow, kufuphi Nässjö nentombi yakhe sifiso. Iminyaka emininzi uye wabaleka omnye kwiindawo ezinkulu blog yabucalawww.apg29.nu . Kwakhona usebenza womshumayeli weendaba ze abachaphazelekayo kunye neengoma, umculo nokushumayela kwiintlanganiso elizweni jikelele.
Le ncwadi ishicilelwe kwi Semnos abashicileli.
Uphindo ngobusuku elide
Ndiziva ngokweemvakalelo kakuhle namhlanje, kodwa iziganeko ebusuku inde iya kuhlala nam. Kodwa njengoko sendibhale nayo kule ncwadi; Ngaphandle uYesu, Mna andinakuze ndiyenze.
Vecka 38, måndag 16 september 2019 kl. 03:58